"Iza moa no olona aminareo, izay manana ondry zato, ka very ny anankiray, no tsy mandao ny sivy amby sivifolo any an’efitra ka mandeha hitady ilay very mandra-pahitany azy ? ary rehefa hitany iny, dia ataony eo an-tsorony, ka dia faly izy… Lazaiko aminareo fa hisy fifaliana toy izany any an-danitra ny amin’ny mpanota iray izay mibebaka." Lioka 15:4-7
Io hariva io dia nanisa ny ondriny i Akita. 97, 98, 99… Misy iray tsy ao! Indray mitopy maso amin’ny andian’ondry dia nahafantarany ilay tsy ao. Ikely no tsy eo, Ikely ilay mpandeha irery, ilay tia andrankandrana, izy foana! Dia aleo ve izy ho any, satria mendrika izany? Sady mbola misy 99 rahateo ireto… Tsia, fa tsy misy toa an’Ikely, tiany Ikely, izy no mpiandry an’Ikely, azy Ikely.
Fantatr’i Akita fa ny ondry very dia tsy mahita irery ny lalana mody. Nanahy izy. Aiza izy izay? Lanin’ny amboadia ve? Naratra ve satria nianjera tany anaty hantsana? Tsy maintsy ataony izay hahitany azy!
Na dia sasatra azai Akita dia lasa nikaroka ilay ondriny. Nitady izy, niantso, nandeha ela. Lasa lavitra izy izany… Nony farany dia nisy feo kely mitaraina, namaly ny antso nataony am-paharetana. Nihaino tsara izy. Eny tokoa, izy izany! Latsaka tao anaty lavaka, ary tapa-tongotra. Mampalahelo!
Hadinon’i Akita ny fahasahiranany. Faly dia faly izy, nibata tam-pitandremana fatratra ilay ondriny, nanambitamby azy, nanao azy teny an-tsorony. Fantatr’ilay ondry ny feony. Nitony izy, naka aina tsara teny an-tsorok’ilay mpiandry ondry nitondra azy niverina any amin’ny andian’ondry.
Matetika ny olona no oharin’i Jesosy amin’ny ondry. Ary maneho ny tenany ho Ilay Mpiandry tsara Izy. Ny fahotantsika no nampanalavitra antsika taminy, nefa mitady antsika Izy, satria tia antsika!
Aoka tsy hitaredretra hamaly ny antsom-pitiavany. Ny hany tanjony dia ny hahita antsika, eo amin’izay misy antsika, ny hanasitrana ny ratrantsika sy hikarakara antsika. Dia ho tonga anton’ny fifaliany isika!